पत्नीलाई ढाडमा बोकेर एक घन्टा दौडिए ५३ पति
काठमाडौं – फिनल्यान्डको शहर सोंकरजारवीमा एउटा अनौठो दौड प्रतियोगिता भएको छ । प्रतियोगितामा पतिहरूले आफ्नी पत्नीलाई ढाडमा राखेर लगभग एक घन्टा दौडिएका छन् । यसबीचमा उसले अनेकौं बाधा पार गर्नुपरेको थियो ।
प्रतियोगितामा १३ देशका ५३ जोडीले भाग लिएका थिए । उपाधि चाहिँ लिथुआनियाका व्यतुत्स किर्कलियुकास र उनकी पत्नी नेरिङाले जिते ।
यो प्रतियोगिता विगत २३ वर्षदेखि चलिरहेको छ । उन्नाईसौं शताब्दीमा फिनल्यान्डका एक डाँकु राकनेनले आफ्नो समूहका साथीहरूलाई गहुँको बोरा वा जिउँदो जनावर बोकेर दौडिन लगाउँथे । त्यसपछि फिनल्यान्डमा यो दौडको परम्परा शुरू भयो ।
विगत २३ वर्षदेखि यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको छ । सन् २००५ देखि यो सोंकरजारवी शहरमा आयोजना गरिएको हो ।
प्रतियोगितामा जोडीहरूले कृत्रिम तलाउ, बालुवा भएको जमीन र काठहरूको बाधा पार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसचोटि लिथुआनियाको जोडीले ६ पटकको विजेता ताइस्तो र माइत्नेनलाई हराएका हुन् ।
हिन्द महासागरको एक तटमा जम्मा भयो ४१ करोड प्लास्टिकका टुक्रा
कुन उमेर समूहका युवा युवतीमा कस्तो असर पर्छ ?
शरीरका अंग फर्फराउँदाको अर्थ, कुन अंग फरफराउँदा के हुन्छ ?
पब्जीको लत लागेपछि पत्नीले दिइन् डिभोर्सको निवेदन !
जसले लगातार १७ पटक मतदान गर्दैछन्
झुटो बोल्ने बच्चा पछि गएर टाठो हुने